क्यान्भासमा पोतीएका महजोडी - नेपालबहस
क्यान्भासमा पोतीएका महजोडी
| १२:१३:२४ मा प्रकाशित
१४ फागुन,काठमाडौं । हरिवंश आचार्य, नामै काफी छ । नाम सुन्नासाथै जो कोहीका मुहारमा हाँसो छचल्किन्छ । उनले बोल्न थाल्दा धेरैको हाँसोका फोहोरा उठ्छ । अझ व्यङ्ग्य नै कस्दा दर्शक पेट मिचीमिची हास्छन् । उनीभन्दा उमेरले केही पाको मदनकृष्ण श्रेष्ठको हाउभाउ पनि उस्तै । उनका कुरैपिच्छे हाँसोका पेटारा भरिएका हुन्छन् । हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका कहलिएका ‘महजोडी’ले प्रत्यक्ष र फिल्मी पर्दामा व्यङ्ग्य गर्दै सामाजिक चेत उजिल्याउँदै आएका छन् ।
त्यही जोडी बिहीबार भने ध्यानमा बसेझैँ मग्न देखिने प्रयास गरे । धैर्यता चाँडै नै ट्ट्यो । बेलाबेलाका ठट्यौली बान्कीले दर्शक र चित्रकारका मुहारमा मुसुमुसु हाँसो छुटिरहेको थियो । मौनताको अन्यौलता चिर्दै थिए रङ र कुचीसहितका क्यानभास । अरुको हाउभाउ र भावभङ्गीलाई पर्दामा जीवन्त उतार्न पोख्त उक्त जोडीका रेशारेशा केलाउन चित्रकारत्रय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, आशुराम खाइजु र डिराम पालपाली खटिएका थिए । पाल्पालीले कलाकार हरिवंश तथा खाइजुर र श्रेष्ठले मदनकृष्णका मुहारलाई क्यान्भासमा पोते ।
चित्रकारितामा कठिन विधा मानिने मुहार चित्र हो । यसमाथि चर्चा कमाएका व्यक्तिको रङ्गिन सन्सारमा उस्तै रङ भर्न कलाकारलाई थप चुनौती थियो । सधैँ हाँसोले भरिने अनुहारका चित्र बनाउने कलाकारका मनमा पनि हँसिलो काया छाइरहेको थियो । यसैले मौनताको त्यो पललाई कैद गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको थियो ।
बिहीबार पर्दा बाहिर आएका उक्त जोडीलाई कलाकारले क्यान्भासमा प्रवेश गराए । प्रत्यक्ष हेरेर कुचीले पोते । उनीहरुको अनुहासलाई कलाकारले दुरुस्त बनाएर टाँसे । कलाकार मदनकृष्णका मुहार चित्र टाँस्दै गरेका चित्रकार कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सामुन्य बसेर चित्र उतार्दा नवरसलाई ख्याल गरिएन भने चित्र बोल्दैन भन्छन् । उनले मदनकृष्णको जीवन्त मुहार उतार्न दिनभर नै कसरत गरे । चित्रकारले कुची चलाउँदै गर्दा मदनकृष्णले हालसालकै चर्चित गीत गुनगुनाउन भ्याए ।
कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मनमेरो हलचल भो
गीत सुनेर कुची चलाउँदै गरेका चित्रकार एकाग्र भए र गीतमा लठ्ठिए । उपस्थित दर्शकको ध्यानाकर्षित भयो । एकैछिनमा फेरि चित्रकारले क्यान्भासमा एक्रेलिक रङ भर्न थाले । चित्रकारिताको सिद्धान्तले भन्छ “कलाकारले बनाएको चित्र बोल्नुपर्छ ।” अझ सेलिब्रेटिका चित्र बनाउन कलाकार झनै सफल हुनुपर्छ । चित्रकार कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भन्छन्, “पोट्रेट कोर्दा आँखाको भावलाई ध्यान दिनुपर्छ, हामी हाँस्दा आँखा पनि हाँसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई उतार्न सकिएन भने मुहार झल्किँदैन ।”
मान्छे कोही शान्त हुन्छ र कोही चलायमान हुन्छ । स्वभावतः मदनकृष्ण शीतल छन् । हरिवंश को स्वभाव चुलबुले छ । त्यही स्वभाव क्यान्भासमा ल्याउनुपर्छ । फोटो हेरेर बनाउन जति सजिलो हुन्छ प्रत्यक्ष बनाउन त्यति नै कठिन हुन्छ । चित्रकार श्रेष्ठ थप्छन्, “कुनै पनि वस्तुमा प्रकाश छिरेर प्रभाव पर्छ, कति भाग उठेको छ, कति गहिराइ छ, त्यहीअनुसार रङ भर्दै जानुपर्छ ।”
चित्रकारले रङ भर्दै गर्दा कलाकार मदनकृष्णलाई आफ्नो अनुहार क्यान्भासमा टाढाबाट हेरेर चित्त बुझेन । नजिकै गएर क्यान्भार औँल्याउँदै सोधे, “मेरो अनुहारसँग मिल्छ रु” “मिलेको छैन र”, चित्रकारको प्रतिप्रश्नमा श्रेष्ठले मुस्कुराएर मुन्टो हल्लाए । उनले झण्डै एक घण्टा बसेर कलाकारलाई साथ दिए । स्वास्थ्य अवस्था कारण सावधानीका साथ देखिएका मदनकृष्णले भने, “मुहार चित्र क्यान्भासमा देख्दा कागजको ऐना हेरे जस्तो महसुस भयो ।”
चित्रकार डिराम पाल्पाली कलाकार हरिवंश लाई क्याम्भासमा उतार्दै थिए । “देखे सुनेकै व्यक्तिको चित्र त मानसपटलमा बसेको हुन्छ, त्यसैले सेलिब्रेटीको मुहार ल्याउन अन्यभन्दा चुनौती हुन्छ, अहिले त्यही महसुस गरिरहेको छु”, उनले भने । देखिरहेकोभन्दा अझै बढी अन्तक्र्रिया गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो कलाकार सफल हुन्छ ।
बिहीबार चुलबुले स्वभावका हरिवंश एकाग्र भएर बस्न सकेनन् । अन्तर्वार्ता, सेल्फी तथा फोटोसेसनमा उनी व्यस्त बने । त्यसबीच पाल्पालीले मुहार चित्र कोर्न सफल भए । उनले पूरा रङ भर्न भने नभ्याएको बताए । कलाकार हरिवंश भन्छन्, “म कुनै क्यारेक्टर ल्याउन त्यसको धेरै अध्ययन गर्छु त्यो मान्छेको क्यारेक्टर बुझ्छु, त्यसपछि क्यामरामा उतार्छु तर चित्रकारले गहिराइमा पुगेर एकै बसाइमा क्यारेक्टर निकाल्दिए, त्यो मेरा लागि प्रेरणा बन्यो ।” उनले बुझेअनुसार आर्ट भनेको मान्छेको आँखा हो । एक्सप्रेसन आँखामा नै निहित हुन्छ । मानिस जे गरिरहेको हुन्छ आँखाले बोलिरहेको हुन्छ । उनले आफ्नो विगतको अनुभव सुनाउँदै ठट्यौली पारामा भने, “एक दिन मैले गाई बनाउन बसेको कुकुर बन्न पुग्यो ।” चित्रकारिताको संवेदनशीलतालाई उनको उत्तिनै ठूलै महत्व राख्छ ।
मुहारमा उत्रेको हाँसो खुशी तथा रोदन अनि प्रकृतिले खिचिदिएका अनेक रेशा पनि रङबाट भर्नुपर्छ । कलाकारसामु बसेका हरिवंशका आँख हाँसिरहेझैँ लाग्थे । अनि मदनकृष्णका उमेरले दिएको चाउरीपना उमेरसँगै मुस्कुराइरहेझैँ थियो । सेलिब्रेटीका मुहारका अनेक भावभङ्गीबीच प्रविधिको आधुनिक जमानामा कुची हल्लाउँदै कागजमा दृष्य कोर्नु सामान्य होइन ।
स्वयं वस्तु, प्रकाश र छायासँग खेलेर कलाकारले मुहार आकृति बनाउँछन् । कलाकार पाल्पालीले क्यान्भारमा नमिलेका मुहारका बान्की मिलाउन निकै मिहेनत र समय खर्चिन्छन् । बीचबीचमा आउने अन्तर्वार्ता र सेल्फीले उनको एकाग्रता भङ्ग भएकाले बिहीबार मुहार चित्रले पूर्णता पाउन सकेन भन्छन् उनी
चित्रकलाका विधामध्ये पोट्रेट चुनौतीपूर्ण विधा हो । दृष्यमा यताउता भए पनि त्यसले फरक पार्दैन । रङ मिलेपछि स्वीकार्य हुन्छ । चित्रकार पाल्पाली भन्छन् , “मुहार चित्रमा क्यारेक्टर आउनुपर्छ ।” नेपालमा मुहार चित्र कोर्ने माहोल छैन । एउटै विधा समाउने कलाकार पनि छैनन् । दृष्यचित्र बढी प्रचलनमा छ । धेरैका रुचि पनि त्यसैमा छ । मागअनुसार उनीहरुले नै मुहार चित्र बनाउने गरेका छन् । पोट्रेट बनाउन जान्नेलाई सक्षम कलाकार मानिन्छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छाकुमार कर्माचार्य भन्छन्, “अझै लाइभ बनाउन सक्यो भने ऊ विश्वमा बिक्छ । उसले हरेक चुनौती स्वीकार्न सक्छ,।”
मङ्गलबारदेखि शुरु भएको मुहारचित्र कार्यशालामा महजोडीसहित नायिका मनिषा कोइराला, पूर्वप्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला, गायिका आनी छोइङ डोल्मा, व्यवसायी प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रवीर मालाकार, प्रतिष्ठानका कुलपति कर्माचार्यसहित पृथ्वीबहादुर पाण्डे, भद्रकुमारी घलेलगायत १२ व्यक्तित्वका मुहार चित्र बनाइने कार्यक्रम संयोजक सुष्माराज राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
पातारासी हिमालको काखमा स्याउ बगैँचा २ मिनेट पहिले
बाँकेमा कोरोना बिरामीका लागि शय्या अभाव ३ मिनेट पहिले
चितवनमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु १२ मिनेट पहिले
प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋणपत्र रजिष्ट्रारमा आरविवि मर्चेन्ट बैकिङ्ग १३ मिनेट पहिले
वेटरदेखि होटल मालिकसम्म बनेका कृष्ण १६ मिनेट पहिले
नेपाल समूहभित्रै विवादः नयाँ दल गठन गर्ने कि नगर्ने ? १७ मिनेट पहिले
नेप्सेमा रिलायन्स फाइनान्सको शेयरमूल्य समायोजन २३ मिनेट पहिले
६ कम्पनीको शेयरमूल्य सर्किट लेभलमा कारोबार २१ घण्टा पहिले
झोलुङ्गे पुलमा लगाइएको कर हट्यो २१ घण्टा पहिले
नायिका केकी तीन दिनमै संक्रमणमुक्त २३ घण्टा पहिले
जसपा: ठाकुर पक्षको बेग्लै भेला १९ घण्टा पहिले
नेपालमा अबको तीन महिनामा संक्रमण दर उच्च हुने ४ घण्टा पहिले
भकारीमा माछापालन गर्दै शिवाकोटी दाजु–भाइ २४ घण्टा पहिले
वैशाखभर मनकामना मन्दिरमा नित्य बाहेकका पूजा बन्द २ दिन पहिले
सुनसरी कांग्रेस कमजोर छैन, अब तपाईंहरु जुर्मुराउनुस् :- डा. शेखर ७ दिन पहिले
गृहमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति पाएका बादलले लिए शपथ ५ दिन पहिले
हाते ट्रयाक्टर चलाउने प्रविधिबारे कृषकलाई जानकारी दिँदै प्राविधिक २३ घण्टा पहिले
ज्योति लाईफको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि ३ दिन पहिले
ट्रष्टले शिल गरेपछि काठमाडौं प्लाजा सुनसान ७ दिन पहिले
भारतीय किसान आन्दोलनको १२० दिन पूरा : आज बन्दविरुद्ध प्रदर्शन ! ४ हप्ता पहिले
खानेकुरा बोकेर ग्राहकको घरसम्मै पुगिन् ज्योति २ हप्ता पहिले
दुई केजी गाँजासहित १४ वर्षीय बालक नियन्त्रणमा १ हप्ता पहिले
नेपाल प्रहरीका ३६६ जना ईन्सपेक्टरको सरुवा, को कहाँ ? २ हप्ता पहिले
कोरोनाका कारण पत्रकार कमल मिश्रको मृत्यु १ हप्ता पहिले
आज खनाल-नेपाल समूहले अभियान घोषणा गर्दै ३ हप्ता पहिले
नयाँ वर्षमा मध्यपुरथिमिमा चार दिन सार्वजनिक बिदा १ हप्ता पहिले
आरक्षबाट आएको हात्तीको आक्रमणबाट किसानको मृत्यु ७ दिन पहिले
के तपाई विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? घरमा आफ्नै मोबाइलबाट कल गर्नुस ! २ वर्ष पहिले
गण्डकी प्रदेशमा स्वाब प्रयोगशालामा ‘पेन्डिङ’ भएपछि मेसिन र जनशक्ति थपिँदै १० महिना पहिले
भारतमा एकैदिन ३ लाख १४ हजारभन्दा बढी संक्रमित, २ हजारको मृत्यु २२ घण्टा पहिले
पोल्याण्डमा राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान, डुडा र युरोपेली पूर्व सदस्यबीच प्रतिस्पर्धा ९ महिना पहिले